Iyo yekuvhundutsa inopinza (Absorber) inoshandiswa kudzvanya kuvhunduka uye kukanganisa kubva munzira yemugwagwa kana chitubu chadzoka mushure mekutora kuvhunduka. Inoshandiswa zvakanyanya mumotokari kumhanyisa kudzoreredzwa kweiyo vibration yefuremu uye nemuviri kuvandudza kunyaradza kwekutyaira kwemotokari. Kana uchipfuura mumigwagwa isina kuenzana, kunyangwe chitubu chinotyisa chinogona kusefa kuzununguka kwemugwagwa, chitubu pachacho chinodzoreredza, uye chinobata chinovhundutsa chinoshandiswa kudzvanya kusvetuka kwechirimo ichi.
Mukumiswa sisitimu, kuvhunduka kunogadzirwa nekukanganisa kwezvinhu elastic, kuitira kuti uvandudze kutsetseka kwekutyaira kwemotokari, kumiswa kunofananidzwa neiyo elastic zvinhu yekuisa kuvhunduka, kune attenuation vibration, Mota kumiswa system uchishandisa shock absorbers kazhinji. hydraulic shock absorbers, musimboti wekushanda kwayo kana furemu (kana muviri) uye axle vibration uye hukama hwekufamba, chinobatisa chekuvhundutsa chiri mupiston chinofamba chichikwira nekudzika, iyo yekuvhundutsa mhango yemafuta kubva kune imwe mhango kuburikidza nemapores akasiyana kupinda. imwe mhango. Panguva ino, kukweshana pakati pegomba madziro neoiri uye kukweshana kwemukati pakati pemafuta mamorekuru anoumba simba rekunyorovesa pakudengenyeka, zvekuti simba rekuzunguza remota mukupisa kweoiri, yobva yatorwa nezvinobatisa kumhepo. Kana iyo chiteshi chemafuta muchinjiko-chikamu uye zvimwe zvinhu zvikaramba zvakafanana, simba rekunyorovesa rinowedzera kana kuderera nekumhanya kwekufamba pakati pefuremu neaxle (kana vhiri) uye zvine hukama nekunaka kwemvura.
Shock absorbers uye elastic components zvinopiwa basa rekuita zvishoma nezvishoma uye kubatwa kwekutya, uye simba rekunyorovesa rakanyanya kukura, izvo zvichaita kuti kumisa kunyungudika kuwedzere uye kukuvadza kukanganiswa kwekubatanidza. Naizvozvo, zvinodikanwa kugadzirisa kupokana pakati pe elastic elements uye shock absorbers.
(1) Mukufamba kwekumanikidza (axle uye furemu padhuze kune mumwe nemumwe), iyo damper yekunyorovesa simba idiki, kuitira kupa yakazara kutamba kune elastic mhedzisiro ye elastic element, kudzikamisa maitiro. Panguva ino, elastic element inoita basa guru.
(2) Munguva yekurembera kutambanudza (maekisi nemafuremu zviri kure kure nemumwe), iyo damper damping force inofanira kunge yakakura uye yekukatyamadza kunofanira kukurumidza.
(3) Kana kumhanya kwehukama pakati peekisesi (kana vhiri) uye ekisi yakakura kwazvo, chinomisikidza chinodiwa kuti chiwedzere kuyerera kwemvura, kuitira kuti simba rekudzikisa rigare riri mukati meimwe muganhu, kuitira kudzivirira. kuve pasi pemitoro yakawandisa.
Mumotokari yekumisa system inoshandiswa zvakanyanya mubhodhoro rekuvhundutsa, uye mukumanikidza uye kuwedzera kufamba kunogona kuita basa rinotyisa rinonzi two-way action shock absorber, pamwe chete nekushandiswa kwezvitsva zvinopisa, kusanganisira inflatable shock absorbers uye. kupikisa kunogadziriswa kuvhunduka kunobata.
Max Auto inopa marudzi ese ekuvhundutsa anopinza zvinhu, anosanganisira: piston tsvimbo, stamping chikamu (chitubu chigaro, bracket), shims, poda metallurgy zvikamu (piston, tsvimbo gwara), mafuta chisimbiso uye zvichingodaro.
Mutengi wedu mukuru akadai se: Tenneco, kyb, Showa, KW.